Iska-horimaad ka dhashay dhul la isku qabsaday ee deegaanka Gambayax, Nugaal oo sababay dhimasho iyo dhaawac. – Radio Daljir
Iska-horimaad ka dhashay dhul la isku qabsaday ee deegaanka Gambayax, Nugaal oo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Garowe, Aug 20 – inta la hubo 4 qof ayaa dhimatay 6 kalena waa dhaawac kaddib markii galabta iska-hor-imaadka hubaysani uu ka dhacay deegaanka Gambayax oo ka tirsan gobolka Nugaal, dhinaca waqooyi-na uga beegan magaalada Garoowe.
iska-hor-imaadka sababay khasaaraha dhimasho iyo mid dhaawac ayaa u dhexeeyey beelo ood-wadaag ah oo wada deggan deegaanno ka tirsan gobolka Nugaal gaar ahaan dhulka la isku-farsaaray iyo nawaaxigiisa.
Muranka iyo is-maandhaafka rabshadda dhaliyey ayaa ka unkamay dhul-bannaan oo labada beelood midi ay damacday in ay ka samayso deegaan magaalo noqda, halka beesha kalena ay diiday samaynta deegaankaasi cusub taasoo dhalisay isku-dhaca galabta.
Qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay iska-hor-imaadkaasi galabta ayaa la soo gaarsiiyey isbitaalka magaalada Garoowe iyadoo hal qof oo ka mid ahaa dadkii dhawacmay uu ku dhintay isbitaalka.
Ma jirto cid illaa iyo haatan kala dhex-gashay labadaasi ardaa ee xurguftu u dhexayso, inkastoo dawladda Puntland ay ku hawlan tahay haatan qorshe wax looga qabanayo isku-dhaca labadaasi ehelo.
Muranka u dhexeeyey labadaasi ardaa ayaa todobaadadii ugu dambeeyey sii xoogaysanayey iyadoo la dareemayey sansaan colaadeed oo ka aloosnayd deegaanka hadda lagu diriray ee Gambayax.